Khilaaf Xoogan Oo soo kala Dhexgalay Raisal Wasaaraha Ethiopia iyo Wasiirka Gaashaan dhiga dalkaasi | Ogaden24
Khilaaf Xoogan Oo soo kala Dhexgalay Raisal Wasaaraha Ethiopia iyo Wasiirka Gaashaan dhiga dalkaasi
Nov 30, 2019 - Aragtiyood
Gaashaandhigga ahna ku xigeenka Xisbiga ODP ee degaanka Oromiya ka taliya Lamma Magersa ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo midaynta xisbiyada dalka ee EPP iyo nidaamka MADAMAR ee uu layimid Abiyi Axmed.
Waxa uu sheegay in bilawgiiba uu guddida fulinta u sheegay in aanay sax ahayn hannaanka lagu midaynayo xisbiyada maamul goboleedyada ee la isugu guurayo xisbiga talada Itoobiya haya, haddiiba ay sax tahayna ay wakhtigeedii ka soo horumartay.
Waxyaabaha uu sheegay waxa ka mid ah in aanay bulshadooda Oromada ee leh xisbiga ODP aanay ka qancin karin arrintan marka horena ay tahay in bulshadu aamminto oo ku qanacdo nidaamka cusub.
Lamma Magersa ayaa ahaa ninka ugu soo dhaw Abiyi Axmed, wuxuuna hayaa xilka ugu sareeya dawladda isagoo awood badan ku leh gudaha degaanka Oromiya ee ay kasoo wada jeedaan isaga iyo Abiyi Axmed, islamarkaana uu hore u soo hoggaamiyay gobolka Oromada iyo xisbigooda.
ODP ayaan wali ka jawaabin hadalka ku xigeenkooda Lamma Magersa